Muhiimadda hoos u dhigista dhexdhexaadiyeyaasha Diiwaanka Maamulka - Cadastre - Geofumadas
Muhiimadda hoos u dhigista dhexdhexaadiyayaasha ee Diiwaanka Maamulka - Cadastre
Nofeembar, 2018 cadastre, tabo cusub
In aan soo bandhigay dhowaan ah Seminar ku saabsan Horumarinta Cadastiga Kaararka ah ee Ameerika, oo lagu qabtay Bogotá, waxaan diiradda saarey inaan xoogga saaro muhiimada muhiimada muwaadinimada ee xarunta dhexe ee faa'iidooyinka habka casriyaynta. bixitinka, hab-socodka is-dhexgalka ee maamulka Cadastre ah - Diiwaan, annaga oo ogaaney in dib u eegista nidaamka waa waajib ah si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa, talaabooyinka, shuruudaha ama hawlaha ha ku darin tallaabo qiimaha, kuwaas oo natiijo ah oo la dhaafi karin ee aan lahaa iyo kuwa ku dhibtoodaa waa isticmaalaha kama dambaysta ah.
Nidaamka casriyaynta wuxuu ka ballaaran yahay habka otomaatiga. Qodobbada muhiimka ah ee dejinta nidaamka nadiifinta cadawga ama habka, istiraatijiyadda lagu hagaajinayo habraaca waa in lagu hormariyaa aragtida waxqabadka ee muwaadiniinta ugu yaraan waqti, kharash, tayada, maamulka xogta iyo raadinta.
Marka la eego qodobkan, waxaan rabaa in aan tixraaco tirada dhexdhexaadiyeyaasha ah ee ku jira maareynta diiwaanka, iyo sida ay tani u saameeyso tilmaamayaasha soo jiidashada maalgalinta dal.
1 Dhexdhexaadiyo badan = = nidaamyo dheeraad ah = shuruudo dheeraad ah = waqti dheeraad ah = kharash dheeraad ah.
Kor-socodka ah ee casriyeynta maamulka diiwaanka waa in ay tixgeliyaan silsilad nidaamka oo dhan, ma faa'iido u ah instiucionalidad laakiin muwaadin ah. From our hay'adaha indhaha mar walba ka fekeraan dib u eegis cusub, a cross-jeegga cusub, shuruud cusub, sida dhinacyada in aan ku daro qiimaha, iyo xataa qabaa yareeyo waqtiga ay daruuri ma aha ka fekeraan jeer caalamiga ah iyo horumarinta xaaladaha jilayaasha waxay ka baxsan yihiin hay'adda, laakiin waxay soo farageliyaan isticmaalaha, sida sahamiyaha, shimbiraha, bangiyada ama degmada.
Tusaalayaal qiimo leh oo ku saabsan hannaanka Maareynta Maareynta Cadastar-isku-dhafan - Diiwaangelinta dal ee Central America oo aan ku martiqaaday inay raacaan, ayaa tilmaamaya, caqabadaha ay ka mid yihiin:
Fursad la'aan la'aanta macluumaadka diiwaangelinta ee diidmada rasmiga ah muwaadiniinta si ay u hesho shahaadada diiwaangelinta.
firidhsan of baadhitaan saddex hay'adaha kala duwan, iyadoo dhab ah jirka, mid dhab canshuurta iyo xaqiiqada maaliyadeedka, iyo in saamaynta muwaadin ah waa in si kasta oo ka mid meelaha kuwan iska by loobahanyahay ah lacag bixinta ama xaalada ugu xun kiisaska kormeerka.
Dhibaatada kaqeyb galka ah ee sahamiyeyaasha la aqoonsan yahay, taas oo ka tarjumaysa cabirkooda iyo in ay kormeeraan in ka badan 5o% kiisaska.
Maqnaanshaha u dhowaanshaha muwaadinka, kaas oo u oggolaanaya feylal (soo bandhigid) adigoon u tegin xafiis ficil ah oo kaliya oo ku yaala xarun dhexe.
Ujeedada fiican ee degmooyinka ay ka caawiyaan uruurinta, laakiin taasi waxay u baahan tahay helitaanka canshuur celin si loo sameeyo diiwaangelin. Iyada oo ay adag tahay in tani keento, sababta oo ah inta u dhaxaysa waqti hawlaha shuruudaha looga hortagi karo saxsanaanta lacagtaas.
Taas ayaa ka dhigaysa muwaadin waa in tag: Diiwaanka Land, ka nootaayo, sahmiyaha, Cadastre Fiscal ah, degmada Cadastre ah, jirka Cadastre oo had iyo jeer soo afjaro oo dhan looga baahan yahay in ay Diiwaanka Land. dhexgalka Tani waa ugu yaraan laba jeer, haddii la siiyaa shuruudaha isku day ugu horeysay, taas oo aan u nadiifiso ilaa qaar ka mid ah macluumaadka qaso, taas oo aan u baahnayn cadeyn xadka iyo meesha cad aad, iyadoo kulamo dhowr ah oo ugu yaraan la nootaayo ah in bartey ka faa'iidaa dhibka.
Hawlaha casriyeynta waa in ay ku jiraan horumarinta moodhalka maareynta muwaadinka. Haddii aysan ahayn, waa farsameynta kaliya ee farsamada.
In dalka this, ugu dhakhsaha badan lagu sameeyo Gelitaanka disminuyeran 30 diiwaangelinta waqti ay ku 22 maalmood, Cadastre cimilada waa maalmo 10 ansixinta a flat + 15 maalmood shahaado + 25 haddii ay jirto kormeer iyo haddii ay jiraan Saddex cadastu oo u dhexeeya; ku dhufo. Sidaas daraaddeed, haddii dalka aan uga jeednaa gaari (sababta oo ah haddii aad ku adkeyso on anshaxa ay gaari doonaan) muddo gaaban ah si ay ugaaraan himilada uu u fududayn lahaa silsiladda, iyadoo tiro ka mid ah geeddi-socodka u gaar ah, sida aan iman in ay ku heshiiyaan, Waan hubaa inaad u baahan tahay inaad tagto oo aad aragto oo kaliya maaha inaad ku raaxaysato dhadhanka kudkaa iyo gallo oo ah raaxo.
Waxaan gelin tusaale kale, in ay dhacdo South America, halkaasoo aan hadda arkayno habka mawduuca, taas oo kaliya ku jira version a of Cadastre, laakiin kuwaas oo ku lug curator iyo waaxda qorshaynta magaalooyinka. Waxa intaa dheer in dhibaatadan, Cadastre waa dhamaadka silsiladda, xataa ka dib markii la diiwaan isbedelka ka mid ah wax ka beddelid garaafyada, iyo kiisaska intooda badan ma ay aqoon ilaa heegan ahaa awoodaan si ay u helaan curator ee dhismaha cusub. Tani waxay ka dhigaysaa muwaadinimada: Diiwaangelinta Dhulka ee xoriyaadka xayiraadaha, nootaallada, sahaminta dhulka, curiyeyaasha, Degmada, Diiwaangelinta Dhulka ee diiwaangelinta iyo Cadastare; oo halista ah in hal sano kadib markii ay iibinayaan, waxay ugu yeeraan Catastro, oo ay u baahan yihiin inay qaataan khariidada sahaminta, maadaama macluumaadka aysan ku haboonayn xogta cadawga.
Muwaadiniintu way ka muhiimsan tahay habraaca.
Qaar badan oo ka mid ah tallaabooyinkan iyo kantaroolyadani waxay u muuqdaan inay ka fiicanyihiin dhinaca hay'adda. Laakiin dhinaca muwaadiniinta, waa waqtigii, kharashka, shuruudaha kala duwan, isdhaafsiga macluumaadka, ugu dambeyntii tilmaamayaasha tartanka tartanka ee dalka.
Hase yeeshee, suurta galnimada waxa muwaadiniinta muusiga ah ee nabadgelyo doonka ahi waxay noqon doonaan tusaale ku filan oo soo socda. Ah, maxaa yeelay halkan sidoo kale tareetada paisa ama patacón gratinado waa muujin aan ka muuqan taxane ah sumcadda xun ee ay bilaabeen Netflix.
2 Dhexdhexaadiyeyaasha yaryar = dhiirigelin ballaaran ee suuqa guryaha = kor u kaca dhaqanka diiwaanka.
Yaraynta dhexdhexaadiyeyaasha silsiladda macaamil diiwaangelinta - Cadastre laguma sameyn karo aragtida hay'adaha, shaqsi ahaan. Tani maahan shaqo loogu talagalay farsamayaqaannada jimicsiga, xitaa xitaa uma ahan diiwaan-hayeyaasha, maadaama intooda badan ay raaci doonaan caadooyinka, nidaamka ama xitaa sharciga. Xitaa ha aadin kumbuyuutarrada ku farxi doona adeegsiga ereyada sida #AI #4IR #IoT #BigData #DeepLearning #DigitalTwin. Isbedeladan (waa iska cadahay inaan kahadlayo dhexdhexaadiyeyaal) oo leh aragti injineer warshad leh iyo rabitaan siyaasadeed ee go'aaminta maslaxada horumarka ummada; iyada oo dareenka muwaadinku uu ku xanuunsanayo nidaamka sharciga, iyo caqli badan oo caan ah oo ku saabsan dhaqammada wanaagsan ee ka soo shaqeeyey duruufaha Mareykanka iyo waddammada ay horay uga soo gudbeen dareenkaas ah in qalafsan yahay “more” qabow, iyada oo aan meesha laga saarin koox yar. dadka had iyo jeer jooga xarumaha, kuwaas oo leh dareen caadi ah oo aad u horumarsan isla markaana keliya sugaya fursadda ay ku dabaqi karaan fikradaha fududaynta ee aan horay u soo baraninkasta oo ay tahay in ay timo timo madow ah si ay u xoojiso waxa horeba loo maleeyay-.
Waxay u egtahay weedha caanka ah ee mid ka mid ah hagayaalkayaga dhinaca kale ee balli: Mashruucyada waaweyn uma baahna injineeriya, laakiin ganacsatada ganacsiga.
Wax kastaa waxa uu diiradda saarayaa muwaadinka, raadinta waxa qiimaha ku daraya. Ka hor, iibsashada daqiiqada daqiiqada taleefanka gacanta ama bixinta biilka ayaa ah nidaam hay'ad; maanta waxaa laga iibsadaa sanduuqa dukaamada ama internetka. Sababtoo ah iyaga ma aha ganacsi ay tahay in lagu soo oogo, laakiin in ay naftooda u huraan adeegga casriga ee isgaarsiinta. Ka hor intaan telefoonkoodu helin ulo gaar ah, fiilooyin, xarumaha xogta, hadda waxay bixiyaan tan sababta oo ah ganacsigoodu ma aha injineernimo madani ah, maaha xitaa sayniska kombuyuutarka.
Qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha ay hay'adaha dawladdu samayn karaan ayaa laga bixi karaa, sababtoo ah maaha qiimo dheeraad ah, ama sababtoo ah qof ayaa si fiican u qaban kara. Tusaale qorista (soo dhaweynta), kaas oo samayn kara jilaa meel u dhow muwaadiniinta ka hor inta uusan u baahnayn inuu tago, sida sahamiyaha, nootaayo, degmada, bangiga, ama waxaa sameeyn kara muwaadin isku mid ah. Eheen shaqo wax tar lahayn, waayo, gobolka waxaa laga yaabaa in xataa kaa caawiyo in aad diiradda on joogto ah shaqeeya iyo shaqo ku ool ah ee qiimaha weyn u muwaadin ah sida shahaadada iyo diiwaangelinta. shuruudaha Ansixinta rating iyo fududeynta habyaalada waxay keeni kartaa in ay hirgeliyaan matoorada Belel automatable, si loo yareeyo khatarta ka mid ah qalad ka habka qofka fayl, inuu lacag rating ah; ku dhowaad sida waxa aanu hadda shahaadada diiwaangelinta 40 sano ka hor waxaan la rumeysan yahay oo keliya in la "sababaysan iyo qoraal ah ee ku xusan aayadda" karin, laakiin hadda waxaan arki carqalad lahayn waa natiijada ay soo saartay nidaamka qaab tabular.
Oo aragti ah inaanan xitaa ka hadleynin qandaraasyada caqli gal ah ama liisaska furan. Waxaan ka hadleynaa hoos u dhigidda dhexdhexaadiyayaasha.
Shaqooyin badan ayaa lagu sameyn karaa tallaabooyin yar, haddii aad ka fikirto muwaadinimada. Tusaale, lacago badan oo kala duwan, kuwaas oo had iyo goor ay u tagaan isla gobolka isla markaana tiknoolaji ahaan loo qaybin karo xataa haddii lagu soo oogay hal dhibic.
Gobolka wax lacag ah ma laha; Wuxuu heystaa lacagteenna. Dawladu waxay u taagan tahay inay siiso adeeg wanaagsan oo muwaadin ah, ma ahan in la xakameeyo rabitaanka u dhaxeeya dhinacyada ku lug leh falal sharci ah. Go'aan-qaadayaasha waa in ay diiradda saaraan dadaalkooda ku saabsan nuxurka adeegga dadweynaha.
Muwaadinku wuxuu wax badan ka bartaa taksiyada ka yimaada xarunta Catastro xafiisyada diiwaangelinta, marka loo eego talooyinka teoriga ee dhismaha ISO.
Waa wax aad u fiican in aan hadda ka sameeyo hal xariiq, si aan u soo sheegno qiyaasta, kaashka kaashka iyo bandhigga, halkii seddex saf oo aan u isticmaali jiray inta u dhaxaysa qiimeeyaha, bangiga iyo alaab iibiyaha. Hadda xitaa ma bixinayo cunto quudin maxaa yeelay waan ogahay in wakhti i soo hagaajin doono.
Waxaan haystaa saddex diidmo oo ku saabsan habkan. Waqti kasta oo falanqeeyaha kala duwan ayaa ii qalma.
Ma xiiseynayo saxiixa Agaasimaha Cadastre, oo leh shaabad sheegaysa in ay soo saartay hay'ad iyo hab lagu hubiyo in ay tahay aamin.
Anigu ma fahmi karo liiska shuruudaha ay daabacaan. Had iyo jeer waa inaan bixiyaa liisanka si aan u sharaxo aniga iyo maamulaha si uu dib ugu eego.
Ma aqaan sida loo helo shuruudahan haddii ay ka soo qaadaan daaqada oo ku tuur qashinka.
3 Imisa tallaabo ayaa hoos u dhici kartaa maamulka diiwaangelinta?
Si loo xoojiyo in ay suurtagal tahay in la fududeeyo, iyada oo aan lumin xakamaynta, waxaan isticmaali doonaa tilmaamaha «sameynta ganacsi»Bishii Oktoobar ee 2018, tirada talaabooyinka ku lugta leh samaynta maamulka diiwaanka, waxaanan diiradda saari doonaa wadamada America iyo Yurub oo isbarbardhigaya. Eeg habka loo isticmaalo wax ganacsi ah loo yaqaan "nidaamka" maxaa yeelay, waan ku yeelan karaan laba kaliya dhex- yihiin hawlwadeenada, laakiin haddii aan iyaga dhex mari saddex jeer, sida xaqiiqada ah waxay noqon doontaa lix nidaamka; maaddaama aanan ku dhex mari karin sababo isku mid ah. Inkastoo qaar ka mid ah tilmaamahaan laga soo qaatay adeegyo gaar ah iyo adeegyo macquul ah magaalooyinka waawayn, waxay yihiin barbar-bar gaabin ah oo laga fiirsado meesha aan doonayno ama aan tagno.
Dalal badan oo ka mid ah xafiisyada diiwaangelinta:
Dalka Rank Dhexdhexaadiyeyaasha
Shaxda kor ku xusan waxay muujineysaa wadamada dhexdhexaadinta ugu badan, oo ka bilaabma 7 ilaa 14. Brazil waxey leedahay xitaa xitaa 14.
Uruguay, Venezuela iyo Nicaragua ayaa ka mid ah tallaabooyinka 9 oo ka mid ah xaaladaha ugu xun ee ay muwaadiniintu u socdaan.
Mexico waxay leedahay 8 dhexdhexaadiyeyaasha.
Colombia, Panama, Guatemala, Argentina iyo Bolivia waxay leeyihiin 7 dhexdhexaadiyeyaasha.
Qaybta koowaad waa liiska rikoodhka diiwaangelinta, marka laga reebo dhexdhexaadiyeyaasha, waxay tixgeliyaan dhinacyada tayada maamulka dhulka, wakhtiyada iyo xiriirka qiimaha ee la xiriira qiimaha sheyga ee macaamilka. Qiimahaan, hoose, ayaa ka wanaagsan; sidaa daraadeed ugu wanaagsan ee kooxdani ay yihiin Ecuador oo leh 8 dhexdhexaadiyeyaashu waxay leeyihiin darajada 75, iyo sidoo kale Colombia oo leh darajada 59 ee dhexdhexaadiyayaasha 7. Xitaa markaa, waxay ku jiraan liiska caqabado badan, oo ka sarreeya 50; Bolivia iyo Nicaragua waxay leeyihiin kuwa ugu fog ee ka mid ah waxtarka soo jiidashada muwaadinka.
Wadamada leh heer dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah.
Jamhuuriyadda Dominican 77 6
Espana 58 6
Jaantuska kore wuxuu muujinayaa wadamada dhexdhexaadinta ka ah 5 ilaa 6.
Halkan fiiri inta kale ee Latin America.
Halkan sidoo kale waxa uu ku dhacaa Spain waa in dhex- 6 oo si cad u arki karaa in ka baxsan nidaamka yaraynta sidoo kale saamaysaa qiimaha muuqaalka, waqtiga iyo tayada macluumaad cadastral, sida kiiska ee Kanada la darajayn ah oo ka hooseeya 40, iyo Peru iyo Costa Rica oo leh darajo hoosta 50. Haiti ayaa waxaa sidoo kale la joojiyo haddii dhex- keliya oo 5 181 ayaa kaalinta a.
Xaqiiqdii waxa muuqata in horumarka isbedelku uu aad u yaryahay, gaar ahaan sababaha bani aadamka sababtoo ah waxay saameyn ku yihiin macaamiisha siyaasadeed, la'aanta adeegyo dadweyne iyo xoogaa yar ee xoogga saaraya muujinta waxtarka. Aynu sheegno sababta oo ah farqiga u dhaxeeya dhaqanka diiwaanka yar.
Wadamada leh dhexdhexaadiyayaal dhexdhexaad ah silsiladda diiwaanka.
Mareykanka 38 4
la fahmay 12 4
Norwey 13 1
Tani waa tan kale ee aad u xun. Eeg, sida dalalka leeyihiin dhex- yar u dhexeeya waa hoos 40 ee darajayn ee tartan ka yar oolnimada 4 registral.Al ka mid awood u leh inay sameeyaan dhammaan tallaabooyinka xujo diiwaangelinta umad kaliya, Waa ficil ahaan iskiis adeegga kahor inta aan la diiwaan galin.
Danmark iyo Finland waxay leeyihiin 3 dhexdhexaadiyeyaasha, iyagoo qiimeynaya 11 iyo 28.
Russia, Switzerland, Talyaaniga iyo Mareykanka waxay leeyihiin 4 dhexdhexaadiyeyaasha. Marka la eego, Maraykanka waa dalka kaliya ee Mareykanka ah ee kooxdan.
Waxaan xiraa maqaalka arrintan, si aan u xasuusto in ra'yigaygu aysan qasab ku noqon karin dhalashada, sida mararka qaarkood gabadheyda ayaa i dareentay.
maalin An celcelis at 11: 30 pm, ee magalaada de Cordillera ku Montecillos, waa gaajaysnayd, oo la kala burburaysa GPS boorsada Diyaaradaha dhididka off my dib, isku dayaysa inay mulkiilaha sharxi qiimaha cabbirka cusub Waan qabanay. Ka dib markii la siinayo ilaa isticmaalaya erayo UTM, koox kala duwan satellite saxo, WGS84, format digital iyo erayada kale uu aaminsan yahay dhaadhiciyo lahaa milkiilaha beerta, waxaan idhi:
Qiimaha ugu muhiimsan ee qiyaasta cusubi waa in deriskaagu aan la gelin karin xaddiga hantidaada.
Waxa uu ka soo baxay tuubo culus oo gaadhay dharkiisa wuxuuna yiri:
Fiiri injineer, tani waa dammaanad ii sax ah.
Kadibna wuxuu iigu yeedhay inaan cuno qaar ka mid ah tortillas cusub oo la jarjaray ukunta iyo digirta, wuxuuna ku taliyay habka loo maro beerta ku xigta.
Nuxurka waxa qiimaha ku daraya, ma naqaanno waxa aan ka nahay dhinaca qaabeynta habka. Muwaadinku wuu ogyahay waana inaanan joojin isaga oo weydiisanaya.
Muxuu yahay shaqaale dawladeed waa inuu gacan ka geysto horumarka dalka, oo nolosha u fududeynaya muwaadinka.
Post Previous«Previous Abaalmarinta abaalmarinta sanadlaha ah ee loogu talagalay Innovation in Infrastructure
Post Next Transoft Solutions iyo Plexscape waxay sameeyaan isbahaysi si ay u bixiyaan matalaadda ugu roon ee baabuurta 3D ee Google EarthNext »
2 Jawaab "Muhiimadda yaraynta dhexdhexaadinta ee diiwaangelinta maamulka - Cadastre"
Salaan Bernard. Waxaan u maleynayaa in go'aamada ugu xiisaha badan ee CNR ay yihiin inay diiradda saaraan baaxadda iyo is-dhexgalka Diiwaanka-Cadastre, halkii ay ka noqon lahaayeen himilooyinka "isku-dhafan" oo laga yaabo inay ka dhalato fududeynta howlaha iyo isku-darka jilayaasha. Xun
bernard samoullier isagu wuxuu leeyahay:
bandhig aad u wanaagsan ayaa sheegay in goobta egeomates Cadastral Progress Seminar duwan ee Latin America, lagu qabtay Bogota waxa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in la yareeyo dhex- in maaraynta Registry - Cadastre.
Waa run in yareynta dhexdhexaadinta ee Diiwaanka - Maaraynta Cadastarada waxay lagama maarmaan u tahay faa'iidada muwaadinka iyo, markaa dalkaas.
Ka mid ah faa'iidooyinka hore u soo sheegnay in warqad ku xusan aad tilmaami karaa hoos u cilladaha, kharashka iyo musuqmaasuqa, iyo sidoo kale kororka isku midka ah ee khayraadka qaranka by heerka sii kordhaya lala xawaalad heerka dhaqdhaqaaq dhaqaale.
Waxay u muuqataa in mawduucani yahay laba waxyaalood oo kala duwan:
1) Fududaynta waxaa ka mid ah cirib tirka tillaabooyinka aan sharciga lahayn ee ka dhex dhaca maamulka dhexdiisa iyo inta u dhexeysa maamullada kala duwan ee ku lugta leh maamulka Diiwaangelinta Cadastre. Waxaan fursad u helay inaan dhowaan falanqeeyo kiis ku saabsan ansaxinta lagama maarmaanka u ah diiwaannada dhulka, iyada oo la raacayo khariidadaha howlaha waxaa la caddeeyay in tirada marxaladaha laga bilaabo 45 illaa 10 la dhimi karo. Diiwaangelinta mid kasta oo ka mid ah guryaha, fududeynta suurtagalka ah ayaa sidoo kale ahmiyad weyn leh, ciribtirka majaajiladaha iyo tagitaanka, xakamaynta silsiladaha heerarka farsamada iyo sharciga iyada oo la adeegsanayo nidaamyada otomaatiga ah, iyadoo la adeegsanayo koodhyada korantada ama si ka sii fiican, tikniyoolajiyada cusub ee loo yaqaan 'blockchain technology' oo leh baaxad ballaaran. Amniga
2) Diiwaanka - Isdhaxgalka Cadastre waa lama huraan si loo hubiyo in ka-faa'iideysteyuhu uu leeyahay hubaal xagga sharciga ah oo ku saabsan hantidooda sida muuqata loo qeexay (Arrin kale ayaa ah saxnaanta sahaminta ee sahanka). Iskuxirka Diiwaangelinta Cadastre wuxuu lahaan karaa dhowr digrii oo isdhaxgalka gudaha isla hay'ad hay'adeed noocee ah Xarunta Diiwaangelinta Qaranka ee El Salvador ama inta udhaxeysa Hay'adaha kala duwan. Waxa muhiimka ah waa in la dammaanad qaado, la sameeyo isla markaana la ilaaliyo isku xirka u dhexeeya xuquuqda iyo hantida ma guurtada ah ee u oggolaaneysa macaamil xayeysiineed oo aan lahayn cilado.
Si kastaba ha noqotee, si toos ah ula xiriirta tartan diiwaangelin tirada tirada habraacyada ku saleysan sameynta sahaminta ganacsiga ayaa umuuqda kuwo adag maadaama xaalado iyo habraacyadu ay aad ugu kala duwanaan karaan wadamada ama inta u dhaxaysa gobollada dalka (marka lagu daro inta badan waddamada lagu xusay. Samaynta sahanka ganacsiga ma lahan nidaam cadastre - diiwaangelin dhameystiran iyo / ama isku mid ah). Waxay mudan tahay in si qoto dheer loo qoro ama loo diiwaan geliyo cilmi baaristaan, haddii ay suurtagal tahayna, iyada oo loo adeegsanayo qaab dhinacyo badan leh. Waa inaan aragnaa waxa tilmaamayaasha la istcimaalo iyo culeyska ka dhexeeya. Heerarka sheegashada, caqabadaha, ficillada cadaaladda ee la xiriira heerka macaamil ganacsi iyo helitaanka amaahda guryaha ayaa ah tusaale ahaan qodobo muhiim ah.
Wax kastoo ah gunaanadka iyo baahida waa, waa in aan luminin aragtida xaqiiqda ah in go'aanka siyaasadeed uu yahay mid go'aaminaya si loo yareeyo kuwa dhexdhexaad ah sababtoo ah waxay badanaa ku qasbanaan doonaan inay iska caabbiyaan isbeddel adag oo ku yimaadda isbeddel lagu sameeyo hababka la aasaasay.